မောင့်အကြိုက် လိုက်လျောမယ် – Grab Love Story
သိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ..။ ရင်အုံကြီးကြီး ၊ တင်သားထွားထွား နဲ့ မြင်ရတဲ့သူ ဘဝင်ဆူသွားရစေတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူပါ..။ ကျမအသားက ခပ်ညိုညိုနဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ခပ်တောင့်တောင့်ပါ..။
သူများတွေက ပြောကြတယ်လေ..။ ကျမကိုယ်ခန္ဓာက ဆူဖြိုးကျစ်လစ်လို့ ဖုထစ်မို့မောက်နေရမယ့်နေရာတွေက ဖုထစ်မို့မောက်နေသတဲ့ ရှင်ရယ်..။ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားက ပြောရရင်တော့ အရပ်က ၅ ပေ မပြည့်တတ်ပေမဲ့ ရင်က ၃၉ ၊ ခါးက ၃၀ ၊ တင်က ၄၀ ရှိတယ်ရှင့်..။ ကျမရဲ့ ဖင်ဆုံအိုးကြီးတွေက ထွားထွားပြည့်ပြည့် တင်းတင်းကားကား ဖြိုးဖြိုးအိအိကြီးတွေပါ..။
ကျမ လမ်းလျှောက်သွားရင် ကျမဖင်ဆုံအိုးကြီးတွေ အချက်ကျကျနဲ့ အနိမ့်အမြင့် လှုပ်ရှားနေပုံတွေက မြင်ရသူ ပုရိသယောက်ျားတွေရဲ့ စိတ်ထဲ မရိုးမရွ ဖြစ်စေတာပေါ့ ရှင်..။ သူတို့ရဲ့ ကိလေသာ ရာဂမီး ရမ္မက်တွေကို ပိုပိုပြီး ထကြွစေတာပေါ့ ရှင်..။
ကျမရဲ့ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကလည်း ဝိုင်းဝန်းမို့မောက်ပြီး တင်းတင်းရင်းရင်း ဝင်းဝင်းအိအိ ရှိနေတယ်..လေ..။ ဒီတော့ ကျမကို တွေ့တဲ့သူတိုင်းက စိတ်မထပဲ နေပါ့မလား ရှင်..။ ကျမ လမ်လျှောက်သွားရင် ကျမကို ကြည့်ပြီး အားရကျေနပ်ကြတဲ့ မျက်နှာတွေ စိတ်ထဲမှာ ကာမမီးတောက် တောက်လောင်နေတဲ့ မျက်နှာတွေ ၊ ကျမကို ကစ်ချင်ကြတဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ အမြဲ ကြုံတွေ့နေရပါတော့တယ်…ရှင်..။
ကျမက အခု အသက် ၂၅ နှစ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ အပျိုလေးပေါ့ ရှင်..။ အပျိုပေမယ့်လည်း ရည်းစားသုံးယောက် ပြောင်းခဲ့ပြီးပါပြီ..။ ပထမ ရည်းစားက အသားခပ်လတ်လတ်နဲ့ ချောမောတဲ့ သူပါ..။ မောင်ကျော်လို့ ခေါ်ပါတယ်..။ သူနဲ့ ရည်းစားဖြစ်တာ ကျမ အထက်တန်း ကျောင်းသူဘဝတုန်းကပါ..။ စိတ်ကစားပြီး ရည်းစားထားမိတာပါ…။ ဒါပေမယ့် ဆယ်တန်း ပထမ နှစ်ဝက်လောက်ပဲ ခံပါတယ်..ရှင်..။ နှစ်ယောက်သား ပြတ်စဲခဲ့ရပါတယ်..။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျမရဲ့ ရှက်တတ် ကြောက်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေကြောင့်ပေါ့..။
ကျမဆယ်တန်းစတက်တဲ့နှစ်မှာ သူနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး ရင်ခုန်ခဲ့ကြတာပေါ့…။ ကျမရဲ့ ကျောင်းသွား၊ ကျောင်းပြန် ကို လမ်းထိပ်မှာ စောင့်စောင့်ပြီး ကြည့်တတ်တယ်လေ..။ နောက်တော့ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီး ကျမကို စာပေးပါတယ်..။ တစ်လလောက်ကြာတော့ ကျမလည်း စာပြန်လိုက်တော့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားရတာပေါ့ ရှင်..။ ချစ်သူဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်သူမှ မရိပ်မိပါဘူး ရှင်..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စာပေးစာယူလုပ်တဲ့အခါ ကျမရဲ့ ကျောင်းစာသင်ခုံထဲမှာ ထည့်ထည့်ပြီး ပေးလိုက် ယူလိုက် လုပ်တာမို့ ဘယ်သူမှ မသိဘူးလေ..။
တစ်နေ့တော့ ကျောင်းကို အစောကြီးလာခဲ့ပါဆိုတာနဲ့ ကျမ အခန်းထဲရောက်သွားတော့ သူကကြိုပြီး စောင့်နေတယ်လေ..။ ကျမမှာ သူနဲ့ စကားပြောရမှာ ရှက်ကြောက်နေတာပေါ့..။ သူက ကျမနားကပ်ပြီး လက်ကလေးကို ကိုင်တယ်..။ ကျမက ရုန်းတယ်..။ သူက မရဘူး…ကျမကို ဖက်ပြီး ကျမပါးပြင်ကို နမ်းတယ်..။ ကျမမှာ ရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်တွေကြောင့် စိတ်ဆိုးမိတယ်..။ သူ့ကိုတွန်းပြီး အခန်းအပြင်ထွက်လို့ အိမ်ပြန်လာခဲ့မိတယ်..။ နောက်တော့ သူ့ရဲ့ တောင်းပန်စာတွေ ရပေမယ့်လည်း ကျမ အနမ်းခံရမှာ ကြောက်သွားတယ်လေ..။ သူနဲ့ ပြန်မဆက်သွယ်ဖြစ်တော့ဘူး..။ ဒါနဲ့ သူလည်း နောက်ဆုတ်သွားရတယ်…။ အဲဒါက ကျမရဲ့ ပထမဆုံး ရည်းစား အတွေ့အကြုံပေါ့ ရှင်..။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ တက္ကသိုလ်ရောက်မှ တွေ့တာပါ..။ သူ့နာမည်က ကိုမြင့်သန်းတဲ့ ..။ သူနဲ့လည်း ရည်းစားဖြစ်တာ သိပ်မကြာပါဘူး ..။ ကျမ တက္ကသိုလ်တက်ပြီး မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲမှာ တွေ့ခဲ့ရတာ..။ ကိုမြင့်သန်းက လူပုံသန့်သန့် ၊ အရပ်ရှည်ရှည် နဲ့ အဝတ်အစားကိုလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်တတ်တယ်…။ ကျမနဲ့ ကိုမြင့်သန်းတို့ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲမှာ တွေ့ပြီးတော့ မျက်မှန်းတန်းမိလို့ ခင်မင်ခဲ့ကြပါတယ်..။ လမ်းမှာတွေ့တိုင်း နှုတ်ဆက်ပြုံးပြကြတယ်..။ နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီး ကျမကို ရည်းစားစကား ပြောတယ်..။ ကျမကလည်း တက္ကသိုလ် ရောက်ပြီဆိုတော့ ဝတ္ထုတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးတဲ့ အတိုင်း ရည်းစားလေးထားပြီး နေကြည့်ချင်တာနဲ့ ကိုမြင့်သန်း အချစ်ကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်..။
တက္ကသိုလ်မှာ ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ကျမ ယှဉ်တွဲလျှောက်ပြီး ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် လုပ်တယ်..။ နှစ်ယောက်သား အတူတူ ကင်တင်းထိုင်တယ်..။ ရည်းစားသက်တမ်း တစ်လလောက်ကြာတော့ သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ဖို့ ပြောတယ်..။ ပထမရည်းစားနဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ရှက်ရွံ့မိပေမယ့် ကိုမြင့်သန်း နမ်းလာရင် တော့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲ ခံလိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားမိပါတယ်..။ သစ်ပင်အောက် ထိုင်တဲ့ စုံတွဲတွေကို တွေ့မြင်ရတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပူးပူးကပ်ကပ်ထိုင်ပြီး လက်ကလေးကိုင်လို့ နမ်းရှုံ့နေကြတာပဲ တွေ့နေရတာမဟုတ်လား..။
ဒီတော့ သမီးရည်းစားဆိုတာ ဒီလိုဘဲ နမ်းရှုံ့တာပဲလို့ ဖြေတွေးလေး တွေးပြီး သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်..။ ပထမတော့ ကျမနဲ့ ကိုမြင့်သန်းတို့နှစ်ယောက် သစ်ပင်အောက်မှာ စာရွက်လေးတွေ ကိုယ်စီခင်းပြီး ထိုင်ကြတယ်..။ ကိုမြင့်သန်းက ကျမလက်ကို ကိုင်ထားပြီး စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ပြောကြတယ်..။ စကားပြောရင်းနဲ့ ကိုမြင့်သန်းက ကျမပုခုံးပေါ် လက်တင်ပြီး ဖက်လာတယ်..။ နောက် ကျမရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်ကို အနမ်းမိုးတွေ ရွာချလိုက်တယ်..။ ကျမရှက်ရွံ့ပေမယ့်လည်း လိုက်လျောပါတယ်..။ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ပါးပြင်ကိုတောင် ကျမ ပြန်နမ်းလိုက်ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် ကိုမြင့်သန်းက ကျမပါးပြင်ကို နမ်းရုံတင် မဟုတ်တော့ဘူး..။ ကျမနှုတ်ခမ်းကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ နမ်းစုတ်လိုက်တယ်..။ ကျမမှာက နိုင်ငံခြားခွေထဲမှာ မြင်ဖူးနေပြီဆိုတော့ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်နမ်းတာကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်..။ ဘာဓါတ်လဲတော့ မသိပါဘူး ရှင်..။ အဲဒီလို ကိုမြင့်သန်းက ကျမကို နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ လျှာဖျားလေးကို ကျမပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး ကလိတော့ ကျမရဲ့ အဖုတ်လေးထဲက တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်သွားရပါတယ်..ရှင်..။ အဖုတ်ကလေး ယားကျိကျိ ဖြစ်သွားပါတယ်…။
ကိုမြင့်သန်းက သူ့ရဲ့အနမ်းမှာ ကျမ မျောသွားပြီဆိုတာ သိလို့နဲ့ တူတယ်..။ ကျမကိုယ်လုံးကို လက်တစ်ဖက်က ဖက်ထားပြီး လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့ နို့အုံလေးကို အင်္ကျီပေါ်ကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ရွစိရွစိ လုပ်ပေးတယ်..။ ကျမရဲ့ အဖုတ်လေးထဲမှာ စစ်ခနဲ စစ်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်..။ ကျမမှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလောက်တော့ လိုက်လျောသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်..လေ……။
ဒါကြောင့်မို့ ကျမ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ကျောပြင်ကို ပြန်ဖက်ပြီး သူ့ရဲ့ အနမ်းနဲ့ နို့တွေကို ကိုင်ဆုပ်နေတာတွေကို ခံစားနေမိတယ်..။ အဲဒီလို ကျမလက်က သူ့ကျောကို ဖက်ထားရာကပြန်ဖြုတ်လိုက်တော့ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ပေါင်ကြားထဲကို လက်နဲ့ တိုက်မိသွားပါတယ်..။ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ထောင်ထနေတဲ့ မာမာအချောင်းကြီးကို လက်နဲ့ ထိလိုက်မိတော့ လန့်ပြီး ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ကျောကို ပြန်ဖက်ထားလိုက်မိပါတယ်..။
အဲဒီအချိန်မှာ ကိုမြင့်သန်းရယ်လေ…ကျမရဲ့ နို့အုံကို ကိုင်ထားတဲ့ လက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ ပေါင်ကြားထဲကို လက်ရွှေ့ပြီး နှိုက်လိုက်ပါတယ်..။ ကွက်တိပါပဲ ရှင်..။ ကျမရဲ့ တရွရွနဲ့ ဖောင်းကြွနေတဲ့ အဖုတ်အုံလေးကို လက်နဲ့ စမ်းမိသွားတော့တယ်..။
ကျမမှာ နဂိုက ရှက်ရွံ့စိတ်ကလေး ပြန်ပေါ်လာတယ်..။ ဒီလောက်တောင် ကျမဖက်က အခွင့်အရေးပေးထားရက်သားနဲ့ မကျေနပ်ပဲ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ နယ်ချဲ့လာတာကို စိတ်ဆိုးမိတယ်..လေ…။ နို့ကလေး ကိုင်ရုံ ၊ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ရုံဆိုရင် တော်ပြီပေါ့..။ ကျမရဲ့ ရှက်ရွံ့စိတ်ကနေ ဒေါသစိတ်ဖြစ်လို့ သွားပါတယ်..။ ကိုမြင့်သန်း ရင်ခွင်ထဲကနေ ကျမ လူးလဲထပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်..။ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လို့ နောက်ကို ကိုမြင့်သန်း အနားကပ်လာရင်တောင် လက်မခံချင်တော့ပါဘူး..။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ကျမ လမ်းခွဲခဲ့တာပါပဲ..ရှင် ။ ကိုမြင့်သန်းကတော့ အမျိုးမျိုး လိုက်ချော့ပါတယ်..။ ကျမကတော့ ရှက်ရွံ့တဲ့စိတ် ၊ ကြောက်တဲ့စိတ် ၊ ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ လုံးဝ လက်မခံတော့ပါဘူး..။ နောက်တော့ ကိုမြင့်သန်းလည်း ယောက်ျားသိက္ခာ ကျသလို ဖြစ်လို့လား မသိဘူး..။ အခြားမေဂျာက ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ထပ်တွဲနေတာ တွေ့ရပါတယ်..။ ကျမရှေ့မှာတင် တစ်ယောက်ပုခုံး တစ်ယောက်ဖက်လို့ လျှောက်သွားနေတယ်လေ..။ ကျမကတော့ ကျိတ်ပြီး ဒေါသဖြစ်ရတာပေါ့ ရှင်..။ တော်ပါပြီဆိုပြီး ကျောင်းစာကိုပဲ လေ့လာကျက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်..။
အဲဒါက ဒုတိယ ရည်းစား ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြီး ကွဲသွားရတဲ့ အဖြစ်တွေပါ…။ ကျမကိုတော့ အပြစ်မတင်နဲ့နော်..။ ကျမအနေနဲ့ အဲဒီအချိန်က ဘာဆို ဘာမှ မသိသေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်တော့လည်း ရှက်ကြောက်စိတ်တွေကြောင့် ဖြစ်သွားရတာ မဟုတ်လား..။ ကျမကိုယ်၌ကလည်း ကိုမြင့်သန်းကို နှစ်နှစ်ကာကာ မချစ်တာလဲ ဖြစ်မှာပါလေ လို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြေတွေးမိပါတယ်..။ ကိုမြင့်သန်းအနေနဲ့ တခြားမိန်းခလေးနဲ့ တွဲသွားနေတာကို ကျမစိတ်ထဲ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကလေးတောင် ဖြစ်ခဲ့တာမှာ မဟုတ်ပဲလေ…။
အဲဒီလိုနဲ့ ကျမ တက္ကသိုလ် စတက်တဲ့ နှစ်မှာပဲ ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ချစ်ပြီး ခွာပြဲခဲ့တဲ့ အချိန်ကစလို့ ကျမဟာ စာကိုပဲ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်…။ ကျမကို စိတ်ဝင်စားပြီး ချစ်လို့ စကားလိုက်ပြောတဲ့သူတွေကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ပဲ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်..။
အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပဲ နေပြီး စာကို ဘဲ အားထုတ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်..။ ကျမ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လာတဲ့ သီတာတို့ ၊ မေလဲ့တို့နဲ့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေလို ပြောမနာ ဆိုမနာ သူငယ်ချင်းတွေလို ပေါင်းသင်းခဲ့ပါတယ်..။ သူတို့အိမ်တွေကို ကျမလိုက်လည်လို့ ကျမရဲ့ အိမ်ကိုလည်း သူတို့က လိုက်လည်ရင်း စားအိမ်သောက်အိမ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ကျမအနေနဲ့ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်လို ရည်းစားထပ်ပြီး ထားရမှာ ထိတ်လန့်နေတဲ့ အချိန်မှာ သီတာတို့ မေလဲ့တို့ကတော့ အတွဲတွေ ကိုယ်စီနဲ့ပေါ့ ရှင်..။ ကျမနဲ့ ကိုမြင့်သန်းတို့ သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီး ကွဲသွားကြတာကိုတော့ သူတို့ သိထားကြတယ်..။ အကြောင်းရင်းကိုတော့ ကျမ မပြောပြတော့ သူတို့ မသိကြပါဘူး..။ စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ပဲ ဆိုပြီး ပြောထားရတာပေါ့..။
သီတာတို့ မေလဲ့တို့ကတော့ ကျမလို မဟုတ်ပါဘူးရှင်..။ ဘွင်းဘွင်းနဲ့ ရှင်းရှင်းသမားတွေ..။ သူတို့ရည်းစားနဲ့ ဘာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကအစ ပြောပြကြတယ်…ရှင့်..။ ကျမမှာ သူတို့ပြောစကား ကြားရတာ နားရှက်လိုက်တာ ရှင်..။ ဒါပေမယ့် နားမထောင်လို့က မရတော့ နားရှက်တာတွေကို အသာဘေးချိတ်ပြီး သူတို့ပြောသမျှ နားထောင်ရတာပေါ့..။ အဲဒီတော့မှ ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ကျမ ကွဲကွာသွားရတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ ကျမသိလာရတယ်..။ သိလာရပေမယ့်လည်း ကျမကိုယ် ကျမ ထိမ်းသိမ်းတတ်တယ်လို့ ဂုဏ်ယူရပါတယ်..ရှင်..။
သူတို့ကျတော့ ဒီလို မဟုတ်ဘူး..။ သူ့တို့ရည်းစားတွေနဲ့ သစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ရင်း ဘယ်လိုတွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတာ အချင်းချင်း ပြောတဲ့စကားဝိုင်းမှာပေါ့ပေါ့လေးပဲ ပြောနေတတ်တယ်လေ…။ သူတို့ပြောနေကြတာကို အရင်းအတိုင်းပဲ ကျမ ဖောက်သည်ချရမှာပဲ..။ ဒါမှ ကျမ ဘယ်လောက်နားရှက်ရသလဲ ဆိုတာပေါ့…။
အဲဒီနေ့ စကားဝိုင်းမှာ သီတာက အရင်စပြောတယ်..။
မေလဲ့…ငါလေ…ငါ…နင်တို့ကို ပြောရအုံးမယ်…သိလား…၊ ဟိုနေ့က ကိုကိုလေ ငါ့ကို သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ဖို့ခေါ်တာ ငါသွားတယ်…သိလား…
ဒီတော့ ..နင့်ကို ..ကိုကိုက ဘာလုပ်လွှတ်လိုက်သလဲ…..
မေလဲကလည်း…နင့်..မောင်လို မဟုတ်ဘူးနော်…ကိုကိုက ငါ့ကို ကိုင်ရုံ ကိုင်တာပါ…
ဘယ်လို ကိုင်တာလဲ…ပြောပြပါအုံး…ငါ့မောင်ကကော ဘာလုပ်လို့လဲ…..
အောင်မာ….မေလဲ့ရာ…ငါမသိဘူးများ အောက်မေ့လို့လား….နင်တို့ ပန်းခြံထဲမှာလေ..ညမိုးချုပ်မှ ပြန်လာတာ….အဲဒီနေ့က ဆရာဆီ သွားမယ်ဆိုပြီး ထွက်လာတာ မဟုတ်လား….
သီတာနော်….အဲ့နေ့က ကိုင်ရုံ ၊ နှိုက်ရုံပဲ လုပ်တာပါ…. ၊ တည်းခိုခန်းကျမ…ကဲတာ….
ဟယ်…ပေါ်ပြီ…ပေါ်ပြီ….မေလဲ့တို့ ရိုးတယ် ရိုးတယ်..နဲ့ တည်းခိုခန်းတောင် ရောက်ဖူးသွားပြီ….
အဲဒီ တစ်ခါတည်းက ဘာတွေ လုပ်တာလဲ…ငါ့ကိုပြောပြရမယ်…နော်…
အင်းပါ….နင်ကလဲ နင့်ကိုကို ဘာတွေလုပ်သလဲ အရင် ပြောပြ…ဟာ…
နင်တို့တစ်တွေကလည်းဟယ်….ငါတစ်ယောက်လုံး ရှိနေတယ်လို့ တောင် မထင်တော့ဘူးလား….ငါ စိတ်ဆိုးလိုက်မယ်…နော်…
ဟုတ်ပါတယ်..ရှင်…၊ ကျမ မှာ သူတို့နှစ်ယောက် စကားနိုင်လုပြီးပြောနေကြတာကို ကြားရပြီးကထဲက နားရှက်လာပါတယ်..။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ ကျမရှိသည်ဟုပင် မထင်ပဲ ပြောချင်ရာ ပြော နေကြတာမဟုတ်လား..။ ကျမ မနေနိုင်တော့ပဲ ရပ်ဖို့ ပြောရပါတော့တယ်..။ ကျမ စိတ်ထဲမှာတော့ သူတို့ပြောစကားကို ဆက်ြ်ပီး နားထောင်ချင်နေတာပေါ့…။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ရှက်စိတ်ကလေး ဝင်လာလို့ အသာနေရတာပါ..။
သီတာ တွေ့လား…ဇင်ဇင်တစ်ယောက် ငါတို့လို မခံစားဖူးတော့ စိတ်ဆိုးမယ် လုပ်နေပြီ…
ဟုတ်တယ်….မေလဲ့ရေ..၊ ငါတို့တစ်တွေ ဇင်ဇင့်ကို ဇာတ်သွင်းပေးရမယ်….
မဟုတ်က ဟုတ်က ဟယ်….
ဟုတ်ပါတယ်…ဇင်ဇင်ရဲ့…၊ ငါအရင် စပြောမယ် သိလား..။ ဒါက အချင်းချင်းတွေပဲ သိထားရမယ့် ကိစ္စပဲ…။ ဒါမှ နင် ရည်းစားလိုချင်စိတ် ပေါ်လာမှာ…
အေးပါ…သီတာမ ရယ်….ပြောမှာသာ ပြောစမ်းပါ…၊ ဇင်ဇင်တစ်ယောက် ငါတို့အပြောနဲ့တင် ရည်းစားထားချင်စိတ် ပေါ်လာမှာ…
အဲဒီလိုကစလို့ သီတာပြောပြသည်မှာ သူနှင့် သူ့ကိုကို တို့ သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ပြီး သူ့ကိုကိုနှင့် သူတို့ အနမ်းတွေ ပေးကြကြောင်း ၊ အနမ်းတွေ ပေးပြီးနောက် သူ၏ နို့တွေကို သူ့ကိုကို က ကိုင်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကို နှိုက်မွှေကြောင်း..။ သူမလည်း အားကျမခံ သူ့ကိုကိုရဲ့ လီးတန်ကြီးကို ကိုင်ဆုတ်ပေးပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတဲ့အကြောင်း..၊ သူ့ကိုကိုက သူ့စောက်ဖုတ်ကို နှိုက်မွှေတော့ သူ့မှာ အရမ်းဖီလင်တွေ တက်ပြီး နှစ်ခါတောင် ပြီးသွားရကြောင်း..၊ သူ့ကိုကိုမှာလည်း သူက လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးလို့ သူ့ကိုကိုလီးတန်ကြီးမှ အရည်များ ထွက်သွားကြောင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွေကို စီကာပတ်ကုံး အကုန်ပြောပြပါတယ်..။
သီတာက အဲဒီလိုပြောပြအပြီးမှာ မေလဲ့ကလည်း အားကျမခံပင် ပြောပြသည်မှာ သူနှင့် သူ၏ မောင်တို့ ပန်းခြံထဲမှာ တွေ့ကြစဉ်က သီတာပြောသလို နို့ကိုင်၍ စောက်ဖုတ်အနှိုက်ခံရကြောင်း ၊ သူ့မှာ စောက်ဖုတ်ထဲမှ အရည်များလျှံထွက်အောင် ကောင်းရကြောင်း ၊ သူ၏ မောင်ကိုလည်း ဂွင်းတိုက်ပေးရာ သူ့မောင်ရဲ့လီးကြီးမှ သုတ်ရည်များ ထွက်၍ ပြီးသွားရကြောင်းများ ၊ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ ဤမျှနှင့် အားမရသဖြင့် နောက်နေ့တွင် ကျောင်းလစ်ပြီး တည်းခိုခန်းသို့ သွားကြကြောင်း ၊ တည်းခိုခန်းတွင် သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ သူ့မောင်မှ လီးတန်ကြီး ထိုးထည့်ပြီး လိုးရာတွင် အရမ်းအရသာရှိကြောင်း ၊ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိုက်သလဲဆိုတာ ဘာနှင့်မျှ မလဲနိုင်အောင်ပင် ဖြစ်မိကြောင်း နောက်ထပ်တစ်ခါတွေ့ဖို့လည်း ချိန်းလာခဲ့ကြောင်း များ ကို အားရပါးရပင် ဖောက်သည်ချ ပြောပြပါတယ်..။
“ ဒါနဲ့ နင့်မောင်ရဲ့ လီးကြီးက ဘယ်လောက်တောင် ရှိသလဲ…”
“ ရှိတာပေါ့…ငါ့ရဲ့ လက်တစ်ကိုင်ဆုတ်လို့တောင် မရဘူးဟဲ့…သိလား..၊ ငါ့မှာ ခံလို့ကောင်းလိုက်တာ ငါ့စောက်ဖုတ်လေးလည်း ကွဲတောင်သွားတယ်…၊ အခုမှ အနာသက်သာသွားတာ..၊ နင့်ကိုကိုရဲ့ လီးကကော ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ….”
“ ငါ့ကိုကိုရဲ့ လီးက တော်တော်တော့ ကြီးတယ်..၊ နင့်လိုပဲ…ငါ့လက်နဲ့ မဆုတ်မိဘူး….”
“ နင်တို့ကလဲ….တော်ကြပါတော့ဟယ်…..ငါ့မှာ နားထောင်ရင်းနဲ့ ကျောထဲစိမ့်ပြီး ကြောက်လာပြီ…တော်ပါတော့…ငါပြန်တော့မယ်….”
“ အဲဒီလိုမလုပ်နဲ့….ဇင်ဇင်ရယ်…ငါတို့လဲ ပြန်မှာပါ….”
ကျမမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေသံကြားရတာနဲ့တင် ရင်ထဲမှာ ကတုန်ကရင်ကြီး ဖြစ်လာရပါတယ်..။ အာခေါင်တွေလည်း ခြောက်လာတယ်..။ ဆက်ပြီးတော့ နားမထောင်ရဲတော့ဘူး…။ ဒါနဲ့ စကားပြတ်အောင် မနည်းလုပ်ပြီး ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်..။
ကျမကသာ အဲ့လို စကားမဖြတ်ရင် ဘယ်လောက်ထိများ ပြောနေအုံးမလဲ မသိပါဘူး ရှင်..။ အဲဒီညက ကျမမှာ အိပ်လို့မရအောင် ဖြစ်နေရပြီး စောက်ပတ်လေးကို ကိုင်မိပါတယ်..။ ပြီးတော့ လက်ညှိုးလေးနဲ့ အခေါင်းထဲ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်မိတော့မှ ကောင်းတဲ့အရသာ ဆိုတာဘယ်လိုလည်း သိလိုက်ရပါတယ်…။
ကျမဟာ သီတာနဲ့ မေလဲ့တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲတွေကြောင့် ကျမမှာရှိတဲ့ ရမ္မက်စိတ်ရိုင်းတွေ ထကြွလာခဲ့ရပါတယ်…ရှင်..။
သီတာနဲ့ မေလဲ့တို့လို အတွေ့အကြုံရဖို့ ရည်းစားတစ်ယောက်လောက် လိုချင်နေမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ ရှင်..။ အဲဒီလိုနဲ့ သီတာတို့ ပြောစကားကို ကြားရပြီးတဲ့နောက် ကျမ ရည်းစားတစ်ယောက် လိုချင်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ကိုကျော်စိုး နဲ့ တွေ့ခဲ့ရတာပါ ရှင်…။
ကိုကျော်စိုးက ကျမတို့အိမ်နဲ့ တစ်အိမ်ကျော်မှာ နေတာပါ..။ ကျမတက္ကသိုလ် တက်စနှစ်တွေမှာ ကိုကျော်စိုးရဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ အသွားအပြန် လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့..။ ကိုကျော်စိုးက ဆိုင်ကယ်ဖယ်ရီ ဆွဲတယ်လေ..။ ဘွဲ့ရပြီးကတည်းက သူများတွေလို အစိုးရလခစား ဝင်မလုပ်ပဲ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဝယ်ထားပြီး ခရီးသည် အပို့အကြို လုပ်တယ်လေ..။ အဲဒါကြောင့် ကျောင်းတက်နောက်ကျတဲ့ အခါမျိုး ၊ ကျောင်းပိတ်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ကိုကျော်စိုးပဲ အပို့အကြို လုပ်ခိုင်းရတာပါ..။
ကိုကျော်စိုးနဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးရတဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ ရင်ခုန်းခဲ့မိတာတွေ ရှိတာပေါ့ရှင်..။ တက္ကသိုလ် သွားတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဆိုင်ကယ်တွေဘာတွေ ရှောင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကျမက သူ့ကျောကို ဖိကပ်ပြီး ကြောက်ရွံ့စိတ်ကို ဖယ်ထုတ်မိပါတယ်..။ ကျမ ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အခါ တင်ပါးလွှဲထိုင်ပြီး စီးပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါ သူ့ပုခုံးကိုတော့ ကိုင်ရတယ်..။ အဲဒီတော့ ကျမနို့အုံကြီးတွေနဲ့ ကိုကျော်စိုးရဲ့ နောက်ကျောကို ထိမိဖိမိတာတွေလည်း ခဏခဏ ဖြစ်တယ်..။
ကိုကျော်စိုးကတော့ ဘယ်လိုနေမယ် မသိဘူး..။ ကျမရင်ထဲမှာတော့ ကြည်နူးစိတ်တွေ ခဏခဏ ဖြစ်ရတယ်..။ အဲ…တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ကိုကျော်စိုးက ကျမကို ချစ်ပါတယ်လို့ဖွင့်ပြောလာပါတယ်..။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမအနေနဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ အနေကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ရယ် သီတာတို့မေလဲ့တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကြားရလို့နားရည်ဝနေပြီးဖြစ်တာရယ် ဆိုတော့ ကျမလည်း ကာမဆန္ဒတွေဖြေဖျောက်ချင်တာကြောင့် ကိုကျော်စိုးရဲ့ အချစ်ကို လက်ခံလိုက်တယ်..။ ကျမ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုကျော်စိုးကို ရင်ထဲအသည်းထဲက ချစ်နေမိတာလည်း ပါတာပေါ့ရှင်..။
ကိုကျော်စိုးအတွက်ဆိုရင် ကျမဘာမဆို လိုက်လျောဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီလေ…။ အချစ်စိတ်က တကယ်ပဲ ဆန်းပါတယ်..ရှင်..။ ကိုကျော်စိုးနဲ့ ကျမတို့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပေမယ့် ကိုကျော်စိုးက စည်းကမ်းတော့ ရှိတယ်ရှင့်..။ ကျမကို လက်ကလေးကိုင် ၊ ပါးလေးနမ်းရုံကလွဲပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းလဲ မနမ်းဘူး ။ ဒီပြင် ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်း မထိမကိုင်ဘူး..။ အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်ကို အလှကြည့်ထားသလိုမျိုး ကျမကို ဆက်ဆံပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် ကျမကတော့ မရပါဘူး..။ ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အခါမှာ ကိုကျော်စိုးခါးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖက်ပြီး ကိုကျော်စိုးရဲ့ ကျောကို မှီပြီး စီးတယ်လေ..။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ကျမရဲ့ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးက သူ့ရဲ့ ကျောမှာ အိပြီး ထိတွေ့မိနေတာပေါ့..။ ကျမမှာသာ အဲ့လို ထိတွေ့လို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမယ့် သူကတော့ ကျောက်ရုပ်ကြီးလိုပါပဲ ခံစားမှု မရှိတဲ့ အတိုင်း မသိသလို လုပ်နေတယ်..။ ကျမမှာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုကျော်စိုးဆိုတဲ့လူဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် တွေးထင်မိပါရဲ့…။ အရင်ကထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရည်းစားတွေနဲ့တော့ ကွာလိုက်တာရှင်..။
ကျမကိုယ် ကျမလည်း အံ့သြမိတယ် ရှင့်..။ ကျမရဲ့ ရှက်ကြောက်စိတ်တွေဟာ ဘယ်ရောက်ကုန်သလဲလို့တောင် တစ်ခါတစ်ခါတော့ ပြန်တွေးမိတယ်ရှင့်..။ ဒါပေမယ့် အခုဆို ကျမမှာ အတွေ့အကြုံ သစ်တွေ တော်တော်ကိုမှ တိုးနေပြီလေ…။
သီတာနဲ့ မေလဲ့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သူတို့ရည်းစားတွေနဲ့ ဆုံပြိး ကဲခဲ့ကြတာတွေ ကျမရှေ့မှာ ပြောပြခဲ့တာကြောင့် နားရည်ဝလာတာလည်း ပါတယ်..။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ဘဲတွေက သူတို့ကို ပေးဖတ်တဲ့ ကာမဆက်ဆံပုံတွေကို တစ်တစ်ခွခွ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်လေ..။
နောက်ပြီး သီတာတို့အိမ်မှာ စာသွားကျက်ရင်းနဲ့ နိုင်ငံခြား အပြာကားအခွေတွေလည်း ကြည့်ဖူးနေပြီ..။ အဲဒီအခွေတွေထဲမှာ လူမည်းကောင်ကြီးတွေနဲ့ လူဖြူမတွေ ပက်ပက်စက်စက် လိုးကြတာတွေကို အရှင်းသား ရိုက်ပြထားတာလေ..။ အဲဒါတွေကြည့်ရတော့ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ စစ်ခနဲစစ်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားရပြီး စောက်ခေါင်းထဲက အရည်ကြည်တွေ အတောမသတ်အောင် ထွက်ထွက်ကျလာရတာကလည်း အခါခါပါပဲ ရှင်..။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ ကျမဟာ အိမ်သာထဲ ကမန်းကတန်းပြေးပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို ဖြဲပြီး လက်ညှိုးနဲ့ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း စိတ်ဆန္ဒတွေ ဖြေဖျောက်ရတော့တာပေါ့..။
ကျမရဲ့ ကာမဆန္ဒတွေ ပြင်းပြထက်သန်လာရတာကို ကျမကိုယ် ကျမ အသိဆုံးပါပဲ..။ စိတ်ထဲက ကိုကျော်စိုးရဲ့ အလိုးကို တောင့်တနေမိရတာကလည်း ခဏခဏပါပဲ..။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုကျော်စိုးရဲ့ အလိုဆန္ဒမှန်သမျှကို လိုက်လျောတော့မယ်လို့လည်း ဆုံးဖြတ်ထားမိတဲ့အထိပါ ရှင်..။ ရွာမဲ့မိုးနဲ့ တိုင်းယက်တဲ့ ကပ်ပလာ အတော်ပါပဲလို့ ဆိုရမယ် ရှင်..။
ကျမခံစားချင်တဲ့ ကာမအရသာကို မြိုးမြိုးမြက်မြက်လေး ခံစားလိုက်ရပါတယ်..။ ဘယ်လိုခံစားလိုက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရှင်တို့ သိချင်ကြမှာပေါ့..နော်..။
အဲဒီနေ့က ကျမကျောင်းသွားတက်ပေမယ့် နေ့တစ်ဝက်နဲ့ ပြန်လာခဲ့ရတယ်..။ ကျမတို့ အိမ်က နေ့ခင်းဘက်ဆိုရင် ဈေးထွက်ကြတာဆိုတော့ အိမ်တံခါး သော့ခတ်ပိတ်ထားခဲ့ကြတာများတယ်..။ ကျမကလည်း ဒီနေ့မှ အိမ်သော့ကို ယူမလာခဲ့မိဘူး..။ ကျမက နေ့တိုင်း ကျောင်းတက်နေတာဆိုတော့ ကျောင်းချိန်က ညနေ သုံးနာရီခွဲထိ ရှိတယ်လေ..။ ကျောင်းကပြန်အလာ မေမေတို့က ဈေးပြန်ရောက်နေပြီ ဆိုတော့ အိမ်သော့ ယူစရာ မလိုဘူးပေါ့..။
ဒီနေ့တော့ ကျောင်းမှာ စာတမ်းဖတ်ပွဲ ရှိလို့ ကျန်တဲ့ အတန်းချိန်တွေကို မတက်ဖြစ်တော့ဘူး..။ ဒါနဲ့ ကျမလည်း အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်..။ အိမ်ရောက်မှ သော့ခတ်ထားတာမို့ ကိုကျော်စိုးတ်ို့အိမ်ဖက် ထွက်လာခဲ့ပါတယ်..။
ကိုကျော်စိုးတစ်ယောက် ဒီအချိန်မှာဆို ထမင်းစားပြန်နားတတ်တာကို ကျမ သိထားတယ်လေ..။ ကျမရောက်သွားတော့ ကိုကျော်စိုးက ဧည့်ခန်းထဲမှာ စာဖတ်နေတယ် ..။ အခုလိုအချိန်မှာ ကိုကျော်စိုးတို့အိမ်မှာလည်း သူတစ်ယောက်တည်းပဲ ရှိတဲ့ အချိန်လေ..။ အိမ်တံခါးက ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ ကျမလည်း အသာလေးဝင်ပြီး ကိုကျော်စိုး စာဖတ်နေတဲ့အနားကို ခြေသံမကြားအောင် အသာလေး ကပ်သွားလိုက်ပါတယ်..။ အနားရောက်မှ သူဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်လေးကို ဆတ်ခနဲ ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်..။
“ ဘာတွေ ဖတ်နေတာလဲ ကိုစိုးရဲ့ …သူများလာတာတောင် မသိရအောင်…”
“ ဟင့်အင်း….မပေးဘူး…ဘယ်လိုစာအုပ်မို့ ဒါလောက်တောင် သဲကြီးမဲကြီး ဖတ်နေတာလဲ…ပြောပြ…”
“ ပေးပါကွ…ကောင်းခန်းရောက်နေပြီ….ပြီးမှ ပြောပြမယ်…”
“ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း…ဘယ်လိုကောင်းခန်းရောက်နေလဲ အရင်ပြောပြ…..ပြောပြမှ ပေးမယ်…”
ကိုကျော်စိုးဖတ်နေတာက ဘာစာအုပ်မှန်း မသိပေမယ့် ကျမက စာအုပ်ကို နောက်ဖက်မှာ ဖွက်ထားလိုက်တယ်…။ ကိုကျော်စိုးကို စချင်တာကြောင့် ကျမက အမူပိုပိုနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်..။ ကိုကျော်စိုးရဲ့ မျက်နှာကြီးက နီရဲနေပြီးတော့ တံတွေးတွေလဲ ခဏခဏ မြိုချနေလို့ သူ့ရဲ့ လည်ဇလုပ်ကြီး နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ လှုပ်ရှားနေတာကို တွေ့နေရတယ်…။
ကိုကျော်စိုးက ထိုင်နေရာက ထရပ်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ စာအုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်ကို လှမ်းဆွဲပါတယ်..။ ကျမက သူယူလို့မရအောင် လက်ကို နောက်ကျောဖက် ပို့ထားလိုက်ပါတယ်..။ သူကလည်း အတင်းပဲ စာအုပ်ကို လုယူပါတယ်..။ ကျမက ကိုယ်လုံးကို လှည့်ပတ်ပြီး ရှောင်လိုက်ချိန်မှာ ကိုကျော်စိုးက ကျမရဲ့ လက်မောင်းကို သူ့ရဲ့ ဘယ်ဖက်လက်နဲ့ လှမ်းဆွဲပြီး ညာဖက်လက်နဲ့ ကျမ ကိုင်ထားတဲ့ စာအုပ်ကို လှမ်းယူလိုက်ပါတယ်..။
အဲဒီတော့ ကျမရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးဟာ သူ့ရင်ခွင်ထဲ လုံးလုံးလျားလျား ရောက်သွားရပါတော့တယ်..။ ကျမက စာအုပ်ကို ယူလို့မရအောင် ရှောင်တိမ်းလိုက်ပေမယ့် သူက လက်မောင်းကို အသေကိုင်ထားလိုက်ပြီး မရရအောင် ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အမိအရ လိုက်လုယူပါတယ်..။ အဲဒီတော့ ကျမတို့နှစ်ယောက် ရင်ချင်းလဲ အပြတ်ကို ထိမိအပ်မိသွားရတော့တာပေါ့..။
ကိုကျော်စိုးရဲ့ ရင်ဘတ်ကို ကျမရဲ့ နို့အုံကြီးတွေက အိခနဲ ဖိမိသွားရသလို ကိုကျော်စိုးရဲ့ ပုဆိုးထဲက ထောင်ထနေတဲ့ အရာကြီးဟာလည်း ကျမရဲ့ ပေါင်တန်ကြီးတွေကို ထိုးမိထောက်မိသွားတော့တာပါပဲ..။ ကျမဟာ သတိဝင်လာမိပေမယ့် ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်အုံကြီးထဲ့ တစစ်စစ်နဲ့ ရွထလာတာကို ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့ မရတော့ပါဘူး..။ ကိုကျော်စိုးကလည်း စာအုပ်ကို ဇွတ်ယူဖို့ မကြိုးစားတော့ပါဘူး..။ ကျမကိုပဲ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အားပါးတရ ပွေ့ဖက်ပြီး ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို အငမ်းမရ နမ်းတော့တာပါပဲ..ရှင်..။
အို…သူ့ရဲ့ အသက်ရှူသံကြီးကလည်း တရှူးရှူးနဲ့ ပြင်းလိုက်တာရှင်..။ နောက်တော့ ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဆတ်ခနဲ ဖိကပ်ပြီး စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်…။ ကျမတော့ ဘယ်လိုမှ ရုန်းကန်လို့ မရတော့ပါဘူး..။ သူက တအားနဲ့ စုပ်ယူထားတဲ့ ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးလိုက်တော့ ကျမ ကြက်သီးတွေ ရှိန်းခနဲထသွားရပြီး သူ့ကိုလည်း ပြန်ဖက်လိုက်မိပါတယ်..။ ကျမရဲ့ ပေါင်တန်ကြီးတွေပေါ်မှာ ဟိုထိုးသည်ထောက်ဖြစ်နေတဲ့ မာတောင့်တောင့် ရှည်မျောမျော အချောင်းကြီးကလည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ မာသထက် မာလာပြီး ကြီးလာတာကိုလည်း ကျမ ခံစားသိရှိနေရပါတယ်..။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျမရဲ့ နူးညံ့အိထွေးတဲ့ ဆီးခုံမို့မို့လေးကလည်း ဖောင်းကာကြွရွလာရပါတယ်..။ ကျမရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကာမဆန္ဒတွေ တွန်းဖွင့်လိုက်လို့ ကျမရဲ့ သွေးသားတွေ ဆူပွက်လာရပါပြီ ရှင်..။ ဒါနဲ့ ကျမလည်း အားကျမခံ ကိုကျော်စိုးရဲ့ နှုတ်ခမ်းကြီးတွေကို ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်တွေနဲ့ ပြန်ပြီး စုပ်ယူပေးမိပါတော့တယ်..။
ကျမရဲ့ သွေးသားတွေ ဆူပွက်နေတာကို ခဏတာငြိမ်သက်သွားစေဖို့အတွက် ကျမမရှက်နိုင်တော့ပဲ ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တာပါ..။ ကိုကျော်စိုးက နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းစုပ်နေရင်းနဲ့ပဲ လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့ နို့အုံးထွားထွားကြီးတွေကို ကိုင်ဆုပ်လာပါတယ်..။ ကျမလေး ရင်ထဲမှာ အသည်းတွေ အူတွေ တယားယားနဲ့ ဖြစ်လာရပါတယ်..။ သူက နမ်းစုတ်နေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်တည့်တည့်ကို မာတောင်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ အချောင်းကြီးနဲ့ တေ့ထောက်လိုက်ပါတယ်..။ ကျမရဲ့ အဖုတ်လေးဟာလည်း မာတင်းလာပြီး သူရဲ့ ထောက်ထားတဲ့ လီးတန်ကြီးကို တုံ့ပြန်နေပါတယ်..။ ကိုကျော်စိုးက ရင်ဘတ်ချင်း ခွာလိုက်ပြီး ကျမရဲ့ နို့ထွားကြီးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျကျနန ဆုပ်ကိုင် ချေမွပါတယ်..။
ကျမသည်အတိုင်း မနေနိုင်တော့ပါဘူးရှင်..။ ကျမရဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားပြီး ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးတန်ကြီး ပေါင်ကြားထဲ ဝင်သထက် ပိုပြီး ဝင်လာအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ပုဆိုးနဲ့ ထမီနှစ်ထပ်ခံထားပေမယ့် သူ့ရဲ့ လီးတန်ကြီး ပူနွေးမှု ၊ သန်မာမှု အတွေ့တွေက ကျမရဲ့ အဖုတ်ထဲက အရည်တွေ ထွက်ကျလာစေပါတယ်..။
ကျမ ရှက်ကြောက်မနေအားတော့ပါဘူး..။ ထကြွလာတဲ့ ကာမဆန္ဒတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်..။ ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ ကျမအဖုတ်လေးထဲထိုးထည့်ပြီး အလိုးခံချင်တဲ့ စိတ်က ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်နေပြီ မဟုတ်လား…။ ကိုကျော်စိုးက ကျမရဲ့ နို့အုံတွေကို ကိုင်တွယ်ဆုတ်နုယ်နေရာက ရပ်လိုက်ပြီး ကျမပုခုံးကို အသာဖက်လို့ အိပ်ခန်းထဲ တွဲ၍ ခေါ်သွားပါတယ်..။
ကျမ ကာမစိတ်တွေ ထကြွနေတယ်ဆိုတာကို ရိပ်မိသွားပြီနဲ့ တူတယ်.။ နောက်မှ သိရတာကတော့ ကိုကျော်စိုးဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်က လိင်ဆက်ဆံမှုတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ အပြာစာအုပ်တဲ့လေ..။ အဲဒီတော့ စာအုပ်ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ ကြွရွနေတဲ့အချိန်မှာ ကျမကို မထင်မှတ်ပဲ ဗြုံးခနဲ တွေ့လိုက်ရတော့ စိတ်တွေ မထိန်းနိုင် ဖြစ်သွားတယ် ထင်တာပဲ ရှင့်..။
အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ ကိုကျော်စိုးက ခါးကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ကျမနှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်ယူနမ်းပါတယ်..။ ကျမရဲ့ ဖင်သားလုံးလုံးအိအိကြီးတွေကို လည် တအားပဲ ဆုပ်နယ်ချေမွပြန်ပါတယ်..။ သူရဲ့ လျှာကြီးကလည်း ကျမရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ထိုးသွင်းပြီး မွှေနေပါတယ်..။
ကျမဟာ ကာမစိတ်တွေ ထကြွလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ စုတ်နမ်းမှုအောက်မှာ မှိန်းမော သာယာမိနေပါတယ်..။ အထိအတွေ့အာရုံကလည်း ကာမအရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ထက်သန်ပြင်းပြစွာနဲ့ပဲ တုံ့ပြန်နေမိပါတယ်..။
ခဏကြာအောင် နမ်းစုတ်နေပြီးမှ ကိုကျော်စိုးဟာ ကျမရဲ့ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို အသာဆုပ်ကိုင်ပြီး ကုတင်စောင်းမှာ အသာလေး ထိုင်စေပါတယ်..။ ပြီးတော့ ကျမဘေးမှာ ယှဉ်ထိုင်ချပြီး ကျမကိုဖက်ကာ ပါးပြင်တွေကို ညင်သာစွာ နမ်းပါတယ်..။ ပြီးတော့ မှ နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်စုတ်နမ်းပြိး ကျမကို အိပ်ယာထက် သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ ဖိကာ အသာလှဲချလိုက်ပါတယ်..။
နှုတ်ခမ်းကို စုတ်နေရင်းနဲ့ ကျမရဲ့ နို့အုံးထွားထွားကြီးတွေကို အင်္ကျီပေါ်ကနေ ကိုင်တွယ်ဖြစ်ညှစ်ပစ်နေပါတယ်..။ ကျမမှာတော့ အလိုးခံချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ အလိုလိုနေရင်း ကြွသထက် ကြွနေပါတယ်..။
ကိုကျော်စိုးက ကျမနို့အုံကြီးတွေကို အင်္ကျီပေါ်ကနေ ကိုင်တွယ်ရတာ အားမရတော့ အင်္ကျီကျယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပစ်နေပါတယ်..။ ဘရာစီယာအောက်မှာ ရုန်းကြွနေတဲ့ နို့အုံထွားထွားညိုညိုကြီးတွေ ပေါ်လာပါတယ်..။ ကျမရဲ့ နို့တွေက ဘရာစီယာ ခံထားပေမယ့် ကြီးထွားလွန်းတာမို့ အသားဆိုင်တွေက ဘေးမှာ လျှံထွက်အစ်ထွက်နေပါတယ်..။ ကိုကျော်စိုးက ဘရာစီယာချိတ်တွေကို မဖြုတ်ပဲ ဘရာစီယာကို အပေါ်လှန်ဆွဲတင်လိုက်တော့ နို့ထွားထွားကြီးတွေက တုန်ခါပြီး ထွက်ပေါ်လာပါတယ်..။
“ အင်း..ဟင်…….ခဏနေအုံး ….ကိုစိုးရယ်…”
ကျမရဲ့ ရင်သားဆိုင်တွေနှစ်ခုကြားတည့်တည့်ကို ကိုကျော်စိုးဟာ မျက်နှာအပ်ချလိုက်ပြီး တအားနဲ့ပဲ နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်..။ ပြီးတော့မှ နို့တွေကို တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ကျကျနန စို့ပါတော့တယ်..။ ကျမရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ ဆူညံမြည်ဟီးလို့ သွေးသားတွေလည်း ဆူဝေလာပါတယ်..။
ဘရာစီယာ ချိတ်မဖြုတ်ပဲ ထားတော့ တင်းကြပ်လာတာနဲ့ ကိုကျော်စိုးကို ခဏနေအုံးလို့ ပြောလိုက်တော့ သူက နို့စို့နေတာ ခဏရပ်လိုက်ပါတယ်..။ ပြောရရင်တော့ ကျမနို့စို့ခံနေရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ကိုယ်လုံး တဖျင်းဖျင်းနဲ့ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ယားလာတဲ့အတွက် အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်လာတဲ့အထိ ဖြစ်လာပါတယ်..။ ကျမ ရှက်မနေတော့ပဲ အင်္ကျီတွေကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာကိုလည်း ဆွဲခွာလိုက်ပါတယ်..။
“ အိုး….အယ်နေတာပဲ ဇင်ဇင်ရယ်…နို့ကြီးတွေက ကိုစိုးအားရလိုက်တာ….ချစ်စရာကြီးကွယ်….”
ကျမဘရာစီယာပါ ချွတ်လိုက်လို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နို့အုံထွားထွားကြီးတွေက ညိုပြီးစိုဝင်းနေကာ တုန်ခါလို့ နေပါတယ်..။ အဲဒါကြီးတွေကို မြင်တော့ သူမအောင့်နိုင်ပဲ ပါးစပ်ကထုပ်ပြောလိုက်လို့ ကျမရှက်သွားရပြီး..နို့တွေပေါ်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တောင် ကြက်ခြေခတ်ပြီး ယှက်ကွယ်လိုက်မိတယ်…။ တကယ်ပဲ သူပြောလိုက်မှ ကျမ ကိုယ်နို့တွေကိုယ်ပြန်ငုံ့ကြည့်ပြီး ရှက်နေမိပါတယ်..ရှင်..။
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်..။ ကျမနို့ကြီးတွေက တကယ့်ကိုပဲ ကြီးမားထွားကြိုင်းလွန်းပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ကျမဟာ အရင်ရည်းစားတွေနဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာပဲ အသွားအလာ အချိန်းအပြု လုပ်ခဲ့တော့ သူတို့ဟာ ကျမနို့ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေ ၊ ခုလို ဗလာကျင်းနေတာမျိုးတွေ မမြင်ခဲ့ရဖူးဘူးရှင့်..။
ကျမရဲ့ လက်တွေနဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ် ကွယ်ကာမိပေမယ့် ရင်သားတွေက အရမ်းကြီးထွားနေတာမို့ ဘယ်လုံပါ့မလဲ ရှင်..။ ရှက်မိလာလို့သာ ကာထားလိုက်ရတာလေ..။
ကိုကျော်စိုးက ကျမလက်တွေကို ဆွဲဖယ်လိုက်လို့ ကျမရဲ့ နို့အုံထွားထွားကြီးနှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီ စို့ပေးပါတော့တယ်..။ ကျမရဲ့ တုန်ခါနေတဲ့ နို့ကြီးတွေကို ပါးစပ်ကြီးနဲ့ အပြည့်ငုံလိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်း ရဲရဲလေးတွေကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ကလိပေးနေပါတယ်..။ အဲဒီနောက်တော့ ကိုကျော်စိုးက သူ့ရဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို ကျမပေါင်ကြားထဲ စမ်းပြီးတော့ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကလေးကို ထမီပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်..။
ကိုကျော်စိုး အုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်က ဖောင်းကြွလာတာမို့ သူ့ရဲ့လက်ကြီးက အုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်လိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုလည်း လက်ဝါးစောင်းနဲ့ စုန်ဆန် ပွတ်သပ်ပေးနေပါတယ်…။ ပါးစပ်ကလည်း အနားမနေပါဘူး ရှင်..။ ကျမရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့ ညှပ်ပြီး ဆွဲယူလို့ လျှာဖျားလေးနဲ့ တရစပ် ကလိပေးနေပါတယ်…။ ကျမမှာ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်လာရပါတယ်..။ ကျမရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ထောင်ပြီး စုလိုက်ကားလိုက် လုပ်ပေးနေမိပါတယ်…။
ကျမလေ ကျမ အရမ်းကိုပဲ အလိုးခံချင်နေပြီ..လေ…။ ကျမရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ကာမစိတ်တွေက တက်ပြီး ဖုံးလွှမ်းနေပါပြီ ရှင်..။
ကိုကျော်စိုးက ဗြုံးဆို ကျမရဲ့ ထမီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်..။ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်နဲ့ ပေါင်သားတွေဟာ အေးကနဲ ဖြစ်သွားရပါတယ်..။ ကျမမှာ တစ်စိမ်းယောက်ျားလေး မပြောနဲ့..။ ကိုယ်ဖာသာကိုယ်တောင် ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီး တစ်ခါမှ မနေဖူးတာကြောင့် ရှက်စိတ်တွေ ဝေရပြီး ထမီကို ကမန်းကတန်း လိုက်ဆွဲမိပါတယ်…။
မရပါဘူး..ရှင်..။ ဒူးတွေ ထောင်ထားမိတဲ့အတွက် ထမီကို ဒူးပေါ်ကနေ လှန်ပြီး ချွတ်လိုက်တော့ ကျမရဲ့ အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ဟာလာဟင်းလင်းကြီး ဖြစ်သွားရပါတယ်..။ ကျမလည်း ကျမရဲ့ ပေါ်လာတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်များနဲ့ အုပ်လိုက်မိပါတယ်..။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကိုကျော်စိုး ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုပြီး မျက်စိလေး အသာဖွင့်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ သူရဲ့ အင်္ကျီတွေကို ချွတ်နေတာ တွေ့ရတယ်…။ ကျမလက်နဲ့ ကျမ အုပ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို အသာကြည့်ပြီး ကျမပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ထိုင်လိုက်ပါတယ်..။ ကျမရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ အုပ်ပြီး ပွတ်ပေးသလို ကျန်တဲ့ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ပေါင်တန်ကြီးတွေကို လျှောပွတ်ပေးနေပါတယ်..။
ကျမမှာ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်း ထပြီး ယားလိုက်တာကလည်း လွန်ပါရော ရှင်…။ စောက်ဖုတ်ထဲ ကလည်း တစစ်စစ်နဲ့ နေအောင် အခံရခက်လိုက်တာလေ…။ သက်သာလို သက်သာညား ဆိုပြီး စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်တွေ ညှစ်ထုတ်လိုက်လို့ စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးလဲ စိုစွတ်နေတာပဲ ရှင်..။
ကိုကျော်စိုးက ကျမ အလွန်ယားပါတယ် ဆိုပေမယ့် သူ့လုပ်ရပ်တွေကိုတော့ လုံးဝ မရပ်ပါဘူး ရှင်..။ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ပေးနေရာကနေ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ဖြဲလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ထိပ်က နီတာရဲနေတဲ့ စောက်စေ့လေးကို လက်ညှိုးနဲ့ မထိတထိ ကလိပေးနေပြန်ပါတယ်..။ ကျမ မနေနိုင်တော့ပါဘူး…။ ငြိမ်ငြိမ် နေလို့မရတော့တာနဲ့ ကျမရဲ့ ခြေထောက်တွေကို ထောက်ပြီး တင်ပါကြီးတွေကို ကော့ကော့ပေးနေမိတော့တယ်..။
ကိုကျော်စိုးက သူ့ရဲ့ လက်ညှိုးကို ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ တဖြည်းဖြည်း ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်..။ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေ ရွှဲနစ်နေလို့ သူ့ရဲ့ လက်ညှိုးဟာ ချောချော ချူချူပဲ ဝင်သွားပါတယ်…။
ကိုကျော်စိုးက လက်ညှိုးကို ထိုးသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးနေတော့ အဖုတ်ထဲမှာ ယားယံမှုကို မချိမဆန့် ခံစားနေရပါတယ်..။ ကိုကျော်စိုးဟာ လက်ညှိုးတင် မကတော့ပဲ လက်ခလယ်ကို ပါ နှစ်ချောင်းပူးလိုက်ပြီး ထိုးသွင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်..။
ကျမမှာ အသဲတလှပ်လှပ် ၊ ရင်တဖိုဖိုနဲ့ပဲ ကျမရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ကော့ပေးနေရပါတော့တယ်..။ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲက ယားယံတဲ့ ဝေဒနာ သက်သာလိုသက်သာညားဆိုပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပူးလိုက်ခွာလိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေမိပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မရပါဘူး..။ ကျမရဲ့ ကာမဆန္ဒတွေ ပိုလို့ ပြင်းပြလာပြီး လက်ချောင်းလေးတွေ ထိုးသွင်းတာထက် ပိုတဲ့ ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးတန်ကြီး နဲ့ အလိုးကို ခံချင်လာပါပြီ….။ ကိုကျော်စိုးကတော့ လက်ညှိုးလက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးနဲ့ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ အသွင်းအထုတ်ကိုပဲ တွင်တွင်ကြီး လုပ်နေပါတယ်..။ ဒီလူနဲ့တော့ ခက်နေပါပြီ ရှင်..။ ကျမဟာ နှုတ်ကလည်း ဖွင့်ဟလို့ မပြောရဲပါဘူး..။ အို…ရှင်..စဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့တင် ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဟာ…ကျမ မျက်နှာတွေ ရှက်သွေးတွေနဲ့ ရဲတက်သွားရပါတယ်..။
အခုဆိုရင် ကျမစောက်ဖုတ်ထဲက ထွက်ကျနေတဲ့ အရည်တွေကြောင့် သူ့မှာတော့ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရတာ ပိုပြီး သွက်လက်မြန်ဆန်နေပါတယ်..။ ကျမရင်ထဲက ကောင်းလွန်းလှတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ပြောတောင် မပြတတ်ပါဘူး…ရှင်…။ ကျမဟာ တင်ပါးကြီးတွေကိုကော့ကော့ပေးရင်း…သွင်းထားတဲ့ လက်ချောင်းတွေကို စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ညှစ်ဆွဲရင်း ကျမစောက်ခေါင်းထဲက အရည်တွေကို ညှစ်ထုပ်ချပစ်လိုက်မိပါတော့တယ်…။
ကျမဟာ ခဏတာ ကျေနပ်မှု ဖြစ်သွားရပြီး တင်ပါးကြီးတွေကို ကော့မထုတ်နိုင်တော့ပဲ ငြိမ်သက်စွာနဲ့ မောဟိုက်နေရပါတယ်…။ ကိုကျော်စိုးက ကျမစောက်ဖုတ်ထဲက စောက်ရည်တွေ ပေကျံနေတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကနေ အောက်ဆင်းလိုက်ပါတယ်…။ သူ့ရဲ့ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ပုံချထားလိုက်ပါတယ်..။ အဲဒီမှာ မာတောင်ပြီး ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှတဲ့ သူ့ရဲ့ လီးတန်ကြီးဟာ ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်..။ ကျမလေ..မျက်လုံးလေး အသာဖွင့်ပြီး သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်လိုက်မိပါတယ်..။
ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးတန်ကြီးက ကျမလက်နဲ့ တစ်ထွာကျော်ကျော်လောက်တော့ ရှည်မှာပါပဲ..။ အလုံးအထည်ကလဲ ကျမလက်တစ်ကိုင်တောင် မကလောက်ပါဘူး..။ သီတာတို့ မေလဲ့တို့ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ လီးတွေလောက်တော့ ရှိမယ်လို့ထင်တယ်…။ မဆီမဆိုင် သွားတွေးမိလိုက်တာပါ..။ လီးတန်ကြီးရဲ့ ထပ်ဖျားက ထစ်နေတဲ့ ဒစ်လုံးချောချောကြီးက ငါးရှဉ့်ခေါင်းကြီးလို ညိုမဲနေပါတယ်..။ လီးတန်ကြီး ထိပ်ဝလေးမှာတော့ အရည်လေးတွေ သီးပြီး စို့နေပါတယ်..။
ကျမမှာ အလိုးခံချင်ပေမယ့်လည်း ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးတန်ကြီးကိုတွေ့တော့ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်မှ ဝင်ပါ့မလားလို့ တွေးပြီး ကြောက်မိပါသေးတယ်…။ ကျမက အခုမှ စပြီး အလိုးခံရမှာ မို့လား…ရှင်..။ ကျမကသာ ကြောက်နေတာပါ…။ သူကတော့ သူ့အလုပ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လုပ်နေပါတယ်…။
ကျမရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ခပ်ကားကားလေး ဆွဲထောင်လိုက်လို့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ဒူးထောက်ပြီး ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်..။ စောက်ရည်တွေ စိုစွတ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဝကို ပူနွေးနွေး လီးထိပ်ကြီးနဲ့ တေ့ထောက်လိုက်ပါတယ်..။
ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ဖြဲလို့ စောက်ခေါင်းထဲ ဒစ်ကြီး ဝင်သွားအောင် ဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်..။ အဲဒီက စလို့ ကျမလေ ကျမ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်စိုးဆိုတဲ့ လူကြီးရဲ့ အကြိုက်ကို လိုက်လျောပြီး အလိုးခံနေရပါတော့တယ်….ရှင်တို့ရယ်…..။
“ အား….နာတယ်…ကိုစိုးရယ်……ကျွတ် ကျွတ်….အား…..နာ….နာတယ်…အ…အား…”
ကိုကျော်စိုးက စောက်ရည်တွေ စိုစွတ်နေတဲ့ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်အဝကို ပူနွေးနေတဲ့ လီးထိပ်ကြီးနဲ့ တေ့ထောက်ပြီး ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ဖြဲလို့ စောက်ခေါင်းထဲကို လီးဒစ်ကြီး ဝင်သွားအောင် ဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်…။
ကျမရဲ့ အပျိုစောက်ဖုတ်ကလေးထဲကို ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးဒစ်ကြီးတစ်ခုလုံး တိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်..။ ကျမတစ်ကိုယ်လုံး တုန်တုန်ရင်ရင် ဖြစ်လာရပြီး အာခေါင်တွေ ခြောက်လာပါတယ်..။ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကလေးဟာ ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးတန်ကြီးကြောင့် မချိမဆန့် နာကျင်သွားရပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် ကျမကိုယ်နှိုက်ကိုက ကိုကျော်စိုးရဲ့ အလိုးကို မျှော်လင့်ထားပြီး ဖြစ်တာမို့ လီးတန်ကြီး ထပ်ပြီး ထိုးသွင်းလာတာကို မျှော်လင့်နေမိပါတယ်..။ ဒါကြောင့် စောက်ဖုတ်ထဲ နာသွားရပေမယ့်လည်း လီးတန်ကြီး ထပ်ပြီး ဝင်သွားစေဖို့ ကျမရဲ့ ထောင်ထားတဲ့ ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးကြီးတွေကို ထပ်ပြီး ကားပေးလိုက်ပါတယ်..။
ကိုကျော်စိုးကလည်း ဒစ်ကြီးဝင်ရုံလောက်နဲ့တင် အားမရပဲ ထပ်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တာ နောက်ထပ် လီးကြီး လက်နှစ်လုံးလောက် ကျမ စောက်ခေါင်းထဲ တိုးဝင်သွားပါတယ်..။ ကျမမှာလေး အတော်ကြီးကို နာတာပါပဲ ရှင်..။ ဒါပေမယ့် အံကလေးကြိတ်လို့ အသက်အောင့်ထားပြီး ကိုကျော်စိုး လီးတန်ကြီး ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်လာတာကို ခံနေပါတယ်..။
ကိုကျော်စိုးက ကျမတော်တော်နာနေမှန်း သိတာနဲ့ လီးတန်ကြီး ဝင်သလောက်ကို ခဏငြိမ်ထားပြီး ကျမရဲ့ နို့အုံထွားထွားကြီးတွေကို မနာအောင် ဆုပ်နယ်ပေးလို့ နို့သီးခေါင်း နီနီလေးတွေကိုလည်း လက်ညှိုးလက်မ ညှပ်ပြီး ပွတ်သပ်ချေမွပေးနေပါတယ်..။
အံ့သြစရာပါပဲ ရှင်….။ ကျမအဖုတ်ထဲမှာ နာကျင်တာတွေ ပျောက်ပြီး ကောင်းလာပါတယ်..။ အဲဒီလို ကောင်းလာတာနဲ့အမျှပဲ ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲက အရည်ကြည်တွေလည်း ထပ်ပြီး စိမ့်ထွက်လာပါတယ်..။ ကိုကျော်စိုးက ကျမရဲ့ စောက်ရည်တွေ စိုစွတ်လာတဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးကို နောက်ဖက် ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး ရှေ့ကို ပြန်ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်..။ ဝင်သလောက်လေးကိုပဲ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးနေပါတယ်…ရှင်…။
ကိုကျော်စိုးက လီးတန်ကြီးကို ဝင်သလောက်လေး သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးနေတာကို ကျမ အားမရနိုင်တော့ပါဘူး..။ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကို လီးတန်ကြီး ဒီထက်မက ဆက်ပြီး ဝင်လာစေချင်ပြီ..ရှင့်…။
“ အင်း…..ကိုစိုးရယ်….ဘယ်လိုများ လုပ်နေတာလဲ ရှင်….အင့်ဟင်း…ဟင်း…အင်း…..”
ဒါကြောင့် ကျမရဲ့ ဖင်ကြီးကို မြှောက်ပြီး အောက်ကနေ ကော့ကာ ကော့ကာဖြင့် ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးတန်ကြီးဆီကို ဖိကပ်ပေးနေမိပါတယ်..။ ကျမရင်ထဲမှာတော့ ကိုကျော်စိုးရဲ့ အလိုးခံနေရတာကို သိပ်ကို သာယာကျေနပ်နေမိပါတယ်..။ ကိုကျော်စိုးက လီးတန်ကြီး ဝင်သလောက် ထိုးသွင်းလိုက် ပြန်ထုပ်လိုက် လုပ်ပေးနေရင်းကနေ ကျမ နို့အုံတစ်ဖက်ကို ငုံပြီး စို့ပေးလိုက်ပါတယ်..။ တစ်ဖက်ကိုစို့ပြီး နောက်တစ်ဖက်ကို ထပ်ပြီး ပြောင်းစို့ပေးပြန်ပါတယ်..။
အဲဒီလို ကိုကျော်စိုးက လုပ်ပေးလေလေ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးတန်ကြီး ပိုပြီး ဝင်လာစေချင်လေလေ နဲ့ ကျမရဲ့ ကာမဆန္ဒတွေ အရမ်းဖြစ်ပေါ်လာနေရပါတယ်..။ အဲဒီလိုအချိန်မှာပဲ ကိုကျော်စိုးက ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးကို ဒစ်ကြီးပေါ်အောင် ဆွဲထုတ်ပြီး သူ့ရဲ့ဖင်အားနဲ့ သူ့ရဲ့ လီးတန်ကြီးကို ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ တဆုံးဝင်အောင် ဆောင့်သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်…။
“ အ…..ရှီး….ကိုစိုး…နာတယ်….အ…အ..အား…..ဇင် မခံနိုင်တော့ဘူး…ရှီး…အား.ကျွတ်..ကျွတ်……နာတယ်…..အား…..အီး….”
အသံမျိုးစုံတို့က တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်…။ ကိုကျော်စိုးက ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးကြီးတဆုံးဝင်အောင် ဆောင့်သွင်းလိုက်တော့ ကျမရဲ့ စောက်ရည်တွေ စိုရွှဲအိုင်ထွန်းနေတော့ ” ဖွတ်….ပလွတ်….ဗြစ်….” ဆိုပြီး ဝင်သွားတဲ့ အသံနဲ့အတူပဲ ….ဖောက်ခနဲပဲ ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲက အပျိုအမှေးပါးလေး ပေါက်သွားကာ ကျမရဲ့ သားအိမ်အဝကို ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးတန်ဒစ်ကြီး တိုးမိတဲ့အတွက် ဒုတ် ခနဲ့ အသံတို့က ဆက်တိုက် ပေါ်ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါသည်..။
ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ ခံရခက်တဲ့ နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလို့ ကိုကျော်စိုး ရင်ဘတ်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တွန်းထားမိပါတော့တယ်..။ ကျမ စောက်ဖုတ်လေးထဲ အောင့်သွားအောင် ကိုကျော်စိုးရဲ့ လီးကြီးက အပြည့်အသိပ် ဝင်သွားပါတယ်…။